Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailandey » Voaroy! Ny vahiny manafina sy misotro toaka any Thailand
Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Thailandey • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Pattaya Pol. Col. Chitdecha Songhong, mpitantana ny paositry ny polisy ao Nongprue, dia nitarika ekipan'ny mpampihatra lalàna tamin'ny alim-pandihizana nandritra ny alina tao amin'ny trano fisotroan-dronono iray andro vitsivitsy lasa izay tamin'ny 26 Jolay 2021.
Teratany vahiny iraika ambin'ny folo sy Thai iray no hita tao amin'ny lakaly fisotroana nisotro zava-pisotro misy alikaola.
Nosamborina ny olona rehetra ary voampanga ho nandika ny didim-pitsarana vonjy maika.
Amin'izao fotoana izao, Thailand dia eo am-panidiana ny fikatonany izay misy fameperana amin'ny fivorian'ny besinimaro sy ny fivarotana na fisotroana toaka.
Ny hitan'izy ireo dia ny fivorian'ny teratany vahiny 11 sy Thai iray misotro zava-pisotro misy alikaola ao amin'ny lakaly fisotroana. Nosamborina izy ireo ary nampangaina ho nanitsakitsaka ny didim-pitsarana vonjy maika sy tsy nankato ny didin'ny sampan-draharaha misahana ny fanaraha-maso ny aretina Chonburi amin'ny fivorian'ny besinimaro sy ny fivarotana na fisotroana toaka.
Ny polisy Pattaya dia nantsoin'ny mponina Soi Wat Boon Samphan fa misy trano fisotroana iray any an-toerana manao fety fisotroan-dronono matetika eny an-toerana, izay fantatr'izy ireo fa mifanohitra amin'ny baiko fanidiana napetraky ny sampana misahana ny aretina Chonburi.
Amin'ny vaovaon'ny bar hafa, nisy horonantsary nipoitra 2 andro lasa izay, mampiseho Pattaya "Bar Coconut Bar" fanta-daza, nifindra tany Soi Buakhao. Ny horonan-tsary dia mampiseho vehivavy miakanjo mamitaka sy mpivahiny Pattaya zokiolona mipetraka miaraka tsy misaron-tava rehefa misotro. Mpandeha moto iray any an-toerana no nanamafy fa isan’alina ireo vehivavy ahiahiana ho mpivaro-tena.